Home Wararka Wasiir Xoosh “Robow iyo wiilasha uu adeerka u yaha waa Shabab maalin...
Wasiir Xoosh “Robow iyo wiilasha uu adeerka u yaha waa Shabab maalin walba qarxiya Xamar”
Wasiirka Dastuurka Soomaaliya ee Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa markii ugu horeysay waxaa wax laga waydiiyay xariga Mukhtaar Roobow Cali [Abuu Mansuur], kaasi oo gacanta ugu jira hay’adda NISA ee dowladda.
Jibriil oo dalka Jabuuti uga qaybgalay munaasabad ayaa ku tilmaamay ku xigeenkii hore ee Hogaamiyaha Al-Shabaab “argagaxiso la siiyay Shahaado” waxaana uu soo dhaweeyay in xabsiga la dhigo. Wasiir Xoosh oo hadalkiisa sii wata aya yiri “Kuwa maalin walba Xamar isku qarxinaayo waa wiilal uu adeer u yahay oo isaga oo tababaray. Sidee lagu aaminaa dadka noocaas ah” Taasoo uu ula jeedo argagixasada Shabaab waa beesha Digil & Mirifle.
Waxaa madaxa Sirdoonka Soomaaliya NISA madax u ah madaxii hore ee amniyaadka Shabaab Sakariya Ismaaciil oo u dheshay beesha Mariixaan, oo ay dad badani is weydiinayaan waxa ay isaga iyo Roobow ku kala duwan yihiin.
Roobow oo kamid ahaa Musharixiinta doorashadda Koonfur Galbeed ayaa helay Aqoonsiga Guddiga doorashooyinka, balse, maamulka Farmaajo ayaa waday dadaalo uu ku doonayo inuu uga saaro coddeynta.
Hadalka wasiirka ayaa kusoo aadayaa xili mar sii horeysay oo maanta oo Sabti ah uu sheegay Afhayeenka Aqalka Hoose, Maxamed Mursal Cabdiraxmaan inay tahay qabashada Roobow mid sharci daro ah.
Gudoomiye Mursal ayaa ku baaqay in si deg deg ah xorriyadiisa dib loogu soo celiyo Mukhtaar Roobow, si uu qayb uga noqdo doorashadda la filayo in 19-ka bishaan ka qabsoonto magaalada Baydhabo.
Intaasi waxaa dheer inuu Mursal soo jeediyay in dib loo dhigo coddeynta inta xal laga gaarayo xiisadda ka dhalatay xariga Roobow, taasi oo gil-gishay xarun goboleedka Bay, oo la ceer-ceereyso dibad-baxyo culus.
Inta la hubiyay ku dhowaad 10 ruux ayaa ku geeryootay banaanbaxyo waawayn oo tan iyo markii lasoo xiray Roobow laga soo wariyay caasimadda KMG Koonfur Galbeed xili ay jiraan isku-dhacyo shacabka iyo ciidamada ah.
Previous articleGud. Maxkamada Caalamiga C/Qawi A. Yuusuf oo ka digay in Soomaaliya si fudud ugu biirto isdhexgalka Itoobiya
Next articleAU force says not involved in Robow’s arrest.
Maxaa kasoo baxay kulankii Laamaha Amniga ?
Ururka Al Shabaab oo sheegatay qaraxyadii ka dhacay Magaalada Gaalkacyo